Wararkii ugu dambeeyay Qarax lagu weeraray Hotelka Naasahablood 2 iyo rasaas socota | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay Qarax lagu weeraray Hotelka Naasahablood 2 iyo rasaas socota
written by warsan radio 28/10/2017
Qaraxa kaddib ayaa la maqlay rasaas culus, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in kooxaha hubeysan ay gudaha Hotelka gashay, iyadoo ay rasaas culus is weydaarsanayaan Ilaalada Hotelka iyo dableyda hubeysan.
Ciidamada ammaanka ayaa xiray goobta, waxaana lagu arkayay gawaarida gurmadka deg dega oo daabulaya dadka ku waxyeeloobay.
Warar horu dhac ah ayaa sheegaya in ugu yaraan shan ruux ku dhimatay qaraxa hore, halka tobanaan kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo isugu jiray dad wadada marayay oo saarnaa gaari iyo kuwa hareeraha wadada fadhiyay.
Hotelka Naasahablood 2 waxaa uu ku dhow Xarunta Nabadsugida Gobolka Banaadir ee loo yaqaanay Godka Jilacow, waxaa uu sidoo kale kaabiga ku hayaa Xarunta Tiyaatarka Qaranka, halkaasoo uu yaalo Koontaroolka laga ilaaliyo Madaxtooyada.
Weerarka lagu qaaday Hotelkan ayaa ku soo beegmaya, labo todobaad kaddib qarax lagu hoobtay oo ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyay Qarax lagu weeraray Hotelka Naasahablood 2 iyo rasaas socota was last modified: October 28th, 2017 by warsan radio